Njalo girl is ngabomvu isikhathi sokuqala ukuyifundisa ngokuya esikhathini, ingenye izimpawu eyinhloko ekuqaleni isikhulile, ukuthomba. Futhi ezinkathini esizayo qinani ukubaluleka kwabo. Kubo ukunquma ukuqala ukukhulelwa, zembula ezinye izifo gynecological. Akumangazi ukuthi abaningi ungathanda ukwazi ngenyanga edlule kangakanani e abesifazane evamile. Impendulo yalo mbuzo akuyona kuqonde njengoba UMUNTU angase acabange. owesifazane ngamunye sinezici zabo ngabanye umzimba, ebheka umjikelezo esikhathini. Kodwa namanje esondele isikhathi evamile zokwehlukaniswa zilingana nezinsuku ezingu-3-8. Uma isikhathi sakho kokuya esikhathini ayilungile, okuphoqelekile kumele ukuba uthintane udokotela wezifo zabesifazane. Awudingi ukuba sikhathazeke, ngoba isikhathi eside kakhulu noma, kunalokho, izikhawu ezimfushane kungenzeka nezimo zakho.
Indlela wokugcina ngenyanga ngemuva kokubeletha? Nalapha futhi, impendulo akukwazi akunakungatshazwa. Evumelanayo umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi is hhayi ngokushesha abuyiselwe. Ungesabi of eside isikhathi ukuya esikhathini emva sokukhulelwa ngenxa yomzimba wowesifazane uye kabusha, akazange abuye ekuphileni kwakhe okuvamile. Nokho, uma ukuya esikhathini akagcini emva kwezinsuku 9-10, kuba isikhathi ukubhekana kuya wezifo zabesifazane ngokushesha. Isikhathi esivamile lwenyanga emva kokuzalwa - mayelana 3-7 izinsuku. Khumbula ukuthi noma, ngisho ukukhathazeka ezincane ngempilo yabo kumele kubikwe kudokotela wakho. Lokhu kuzosiza ukuba babhekane ngokushesha nanoma yiziphi izinkinga.
Indlela wokugcina ngenyanga ngemva kokukhipha izisu? Ngokuvamile, umzimba ikhumbule linye. Ngemva isisu ngokuvamile kwenzeka opha, okungase kudidaniswe esikhathini. ubude bayo kubalulekile ukwazisa wezifo zabesifazane yakho. Ukopha emva isisu ihlala mayelana efanayo esikhathini, izinsuku 5-7. Uma isisu kwaba imithi, ubude bayo obuyisilinganiselo 2 amaviki. Indlela wokugcina ngenyanga ngemuva kwesikhathi yokutakula? Ezinsukwini zokuqala zesikhathi labo kungaba elengeziwe noma, Ngakolunye uhlangothi, ezincane kunokujwayelekile, kodwa nesikhathi esifushane umjikelezo kuziwa isilinganiso sakho ngabanye.
Njengoba ngenyanga edlule ngemuva kwesisu? Khumbula ukuthi ngemva kokuqedwa okuzenzakalelayo yokukhulelwa okokuqala, ungase ube ukopha amanye noma zichithe spreadable uhlamvu. Akubalulekile ukuba esabe, kodwa isimo has ukulawula udokotela ukuba khona. Ngokuvamile emva isisu omunye umjikelezo kokuya esikhathini is yeqiwe. Emjikelezweni olandelayo kumele kwenzeke njalo ngenyanga, isikhathi okungase ukuhluka evamile.
Manje uyazi izinsuku eziningi ukuthi ngenyanga edlule. Ngezinye izikhathi owesifazane eke nokunwetshiwe esikhathini. Khumbula, lokhu ngesizathu esizwakalayo ukubona udokotela, ngoba kungase kube okuhlukile evamile nokuphathwa isifo esisongela impilo. Too eside futhi nezikhathi esindayo kungaba uphawu menorrhagia. Wenza lesi sifo izici ezihlukahlukene. The main wabo - ukuhlukumeza kwegazi coagulation, ukwehluleka hormone, lesizalo iziyaluyalu.
Esinye isizathu sokuba kokuya esikhathini nokunwetshiwe ongakhonza ukuhlukumeza umsebenzi amaqanda, okuholela ukuphazamiseka nge-ovulation. ukuya esikhathini isikhathi eside singenzeka uma izinkinga ezingadingekile esibelethweni. Ukuhlukumeza esivamile, okuholela ukubhidlika nyangazonke - ke ama-polyp. Basuke kwakhiwa esibelethweni efomini ngamaqhubu.
Qonda lokho ncamashi unayo isifo, udokotela uzokwazi, Ngakho-ke, ngo-kungekho umcimbi akufanele bahlanganyele self-ukuxilongwa. Ukuze ulawule impilo yabo kufanele kube impoqo ukumaka ezinsukwini zokuqala ukuya esikhathini isikhathi sabo. Kulokhu, ungakwazi kalula uqaphela kwephula umthetho futhi ngokushesha bakwazi uthintane onguchwepheshe.
Ngingaba ageze umntwana nge umkhuhlane? Imibono lodokotela kanye namathiphu